Intraductal papilloma - လက္ခဏာတွေ, ကုသ, ခွဲစိတ် intraductal papilloma ဖယ်ရှားပစ်ရန်
Intraductal papilloma - ကင်ဆာတားဆီးဖို့ဘယ်လို?
Intraductal papilloma ဝျေါမှတိုးတက်မှု၏မြင့်မားသောအန္တရာယ်ရှိသည် oncological ရောဂါများပြောပြတယ်။ အဆိုပါအကြောင်းတရားများ, ရောဂါလက္ခဏာနှင့်ရောဂါဗေဒ၏ကုသမှုနည်းလမ်းများကိုခွဲထုတ်, အကြှနျုပျတို့ကိုဤရောဂါထည့်သွင်းစဉ်းစားကြပါစို့။
intraductal papilloma ၏အကြောင်းတရားများ
Intraductal papilloma င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံနို့ပြွန်များ၏ lumen တိုက်ရိုက်ထွန်းသစ်စ, papillary ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်တွင် - တဲ့ epithelial တစ်ရှူးများထံမှဖွဲ့စည်းခဲ့တစ် papillary excrescences ။ ရောဂါဗေဒ (အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်း) မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ဖွံ့ဖြိုး, သားမွေးတယ်ဆိုတာအသက်အရွယ်အမျိုးသမီး။ အဆိုပါရောဂါဗေဒ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းဟော်မုန်းနောက်ခံတစ်ဦးကိုချိုးဖောက်ဆင်ခြင်၏။ မကြာခဏထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်ဆန်းကဲ့သို့သောမီးယပ်ရောဂါများအတွက်ဖြစ်ပေါ်:
ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေအကြောင်းတရားများ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများတွင်ဆရာဝန်များကဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီး intraductal papillomas အချက်များများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို predisposing:
ဒါဟာ papillary papilloma ရင်သားကင်ဆာအတွက်ပြွန်မကြာခဏလက်ဆောင် fibrocystic ရင်သားကင်ဆာရောဂါ၏နောက်ခံပေါ်တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်းသတိပြုသင့်ပေသည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ရောဂါဒေသခံ extension ကိုပြွန်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ တိုက်ရိုက်ကင်ဆာနှင့် papillary ကြီးထွားလာခြင်းသည်၏ဘေးဒဏ်သင့်ဒေသများဖွဲ့စည်းထားပါသည်ရန်။ လုံးဝမျိုးရိုးလိုက်တဲ့ရောဂါထွက်အုပ်ချုပ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး - မိခင်ရဲ့သို့မဟုတ်အဖွားရဲ့ intraductal papilloma ၏ရှေ့မှောက်တွင်ရောဂါ၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေပါသည်။
Intraductal papilloma - လက္ခဏာများ
မကြာခဏရောဂါမီးယပ်သားဖွားဖို့လာမယ့်ခရီးစဉ်အတွင်းအခွင့်အလမ်းအားဖြင့်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကျိတ်များ၏ဒေသခံ feature ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကနဦးအဆင့်မှာသူတို့ paranasal mammary ပြွန်ထဲမှာစီစဉ်ပေးနေကြသည်။ သူတို့ဟာခက်ခဲအဖွဲ့ဝင်များကိုဖြစ်ကြသည်, ဒါကြောင့်သူတို့ detect လုပ်ဖို့ခက်ခဲသည်။ လွတ်လပ်စွာအတူတူပင်လူနာအောက်ပါအတိုင်းရာ၏လက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်ရောဂါ intraductal papilloma ၏အလယ်ရောဂါ:
အဆိုပါနို့သီးခေါင်းကနေအားကုန်။ ဤရောဂါအတွက်လူနာနို့သီးခေါင်းကနေ neobilnye ဥတုသက်ဆိုင်ရာ။ သူတို့ရဲ့အရိပ်ကွဲပြားနိုင်ပါသည် - ပွင့်လင်းထံမှအနီရောင်ဖြစ်သည်။ ခွဲဝေ ကြောင့်ရောဂါဗေဒရောဂါခက်ခဲအရာကိုတစ်ဦးအမြဲတမ်းနှင့်သည် Periodic သဘာဝအဖြစ်ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
ရင်ဘတ်တွင်နာကျင်မှု။ လာသောအခါပရိသ palpation နာကျင်ခြင်းတောက်ပတိုက်ရိုက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ရင်ပတ်ပေါ်ဖိအားနို့သီးခေါင်းကနေလျှို့ဝှက်ချက်မှမြင့်တက်ပေးပါ။
ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ရင်သားပုံသဏ္ဍန်အတွက်ပြောင်းလဲမှု။ ရောဂါကူးစက်မှုကိုချွန်ထက်နာကျင်မှု, ရောင်အရေပြား, လာခြင်းစေပါတယ်။ Secret purulent ဖြစ်လာ, အဝါရောင်တင့ရယူပါ။
Intraductal papilloma - ကုသမှု
ကုသခံရဖို့ Papilloma ရင်သားကင်ဆာပြွန်ဆေးရုံယူသွားတတ်၏, ဆေးသမားမကြာခဏ precancerous ခွအေနအေအဖြစ်မှတ်။ ထိုကြောင့်, ဆရာဝန်တွေအမြဲတမ်း intraductal papilloma ၏ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားအကြံပြုပါသည်။ ဒါဟာအပြိုင်နှင့်ရှေးရိုးစွဲကုသမှုထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ Anti-inflammatory, immunostimulatory မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုခနျ့အပျဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကား, အနာရောဂါငြိမ်းစရာလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်မှုများထပ်တလဲလဲကင်ဆာလုပ်ငန်းစဉ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကာကွယ်ပေးသည်။
Intraductal papilloma - ရိုးရာကုစား၏ကုသမှု
သငျသညျအချိန်ပေါ်ကုသမှုကိုစတင်ပါလျှင်အသေးစား ductal papilloma ရင်သားကင်ဆာလွတ်လပ်စွာပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်နောက်ထပ်ရန်ပုံငွေအဖြစ်ဆရာဝန်များက၎င်းတို့၏လူနာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများအတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ကြောင်းရိုးရာကုစားဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ ဒီဥပမာအနေနဲ့အောက်ပါစာရွက်ဖြစ်ပါသည်:
intraductal papilloma နှင့်အတူကုထုံးကော့တေး
အနီရောင်စပျစ်ရည်ကို - 100 ml ကို;
ပန်းသီးဖျော်ရည် - 100 ml ကို;
သံပုရာ - 1/2 တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း;
ဝက်အတွင်းဖြတ်သံပုရာရေဆေး, ဒဏ်ငွေ grater အပေါ်ခွံတွေနဲ့ပွတ်ပေးပါ။
ဒယ်အိုးနှင့် reheat သို့သောစပျစ်ရည်သွန်းလောင်း။
5 မိနစ်ပြုတ်, ကို turn off, filtered ။2ဇွန်းနေ့စဉ်ယူပါ။ ဇွန်း။
intraductal papilloma များအတွက်အစားအသောက်
သုတေသနဆရာဝန်များကထိုကဲ့သို့သော intraductal papilloma ရင်သားကင်ဆာအဖြစ်ရောဂါအပေါ်အစားအစာများ၏အပြုသဘောဆောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုသက်သေပြခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါနို့သီးခေါင်းကနေပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဥတုအတွက်ကျဆင်းခြင်းသတိထားမိဖို့ရက်အနည်းငယ်ပဲနို့၏နေ့စဉ်ဖန်သောက်ရသူကိုအမျိုးသမီးများနေ့။ ဒါ့အပြင်အစားအသောက်များတွင်အတွက်စာအာဟာရပညာရှင်တွေဖက်တီးအက်ဆစ်ပမာဏကြီးမားတဲ့ပါဝင်သည်ရာ, ငါးထည့်သွင်းရန်အကြံပြုသည်။ ရောဂါ intraductal papilloma နှင့်အတူအမျိုးသမီးများ၏အစားအသောက်များတွင်အတွက်မသင်မနေရ Citrus ဖြစ်သင့်သည်။ သူတို့ရဲ့ limonene ၏ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ရင်ဘတ်ထဲမှာအကျိတ်ဖြစ်စဉ်များဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။
Intraductal papilloma - စစ်ဆင်ရေး
အဆိုပါ intraductal papilloma ဖယ်ရှားပစ်ရန်ခွဲစိတ်ကုသမှုကဏ္ဍအလိုက်ဆိုင်ရာပါရဂူကျမ်းပြုစုအဖြစ်ခွဲစိတ်တွေကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။ ကကိုင်ပြီးအခါပြုပြင်ထားသောလိုင်းများနှင့်အတူဖျော်ဖြေ glandular တစ်ရှူးယစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါခွဲစိတ် areolar ဇုန်၏တူညီသောနယ်နိမိတ်မှာထွက်ယူသွားတတ်၏။ အဆိုပါ intraductal papilloma ထုံးစံ၏ဖယ်ရှားရေးပြီးနောက် mammoplasty ဘို့လိုအပ်ကြောင်းရှင်းလင်းစေပါတယ်။ အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးယေဘုယျမေ့ဆေးအောက်တွင်ဖျော်ဖြေနေသည်။ ကင်ဆာအကျိတ်ထုံဆေးသုံးပြီးတိုက်ရိုက် areola အောက်တွင်ဒေသသုံးအဖြစ်ပြန်ဆိုသောအခါ။
Intraductal papilloma နှင့်ကိုယ်ဝန်
ရင်ပတ်၏ Intraductal papilloma ရောဂါနှင့်ကလေး-bearing နိုင်ပါသည်။ ဤအချိန်တွင်ဇီဝကမ္မဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှု papilloma virus ကို၏ activation အဘို့အဆင်သင့်အခြေအနေများဖန်တီးပေးပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်းရောဂါ၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်အတူ, ဆရာဝန်တွေတစ်ချောင်းမြောင်းကို ယူ. နည်းပရိယာယ်ကိုကြည့်ပါ။ ကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်း ductal mammary papilloma ဖယ်ရှားခြင်းမှာထွက်သယ်ဆောင်:
Endometriosis - အဘယ်အရာကိုကအန္တရာယ်နာမကျန်းထက်လက်လှမ်းဘာသာစကားဖြစ်ပြီး, ဘယ်လိုကုသသလဲ?
ဘာ tampon မှီဝဲလျှင်?
ရင်သားကင်ဆာ ultrasound အဘယ်အရာသနည်း
အဆိုပါ labia အပေါ်ဒါကိုတော့
Intraductal papilloma - အကြောင်းရင်းများ, ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကုသရေး
သားသမီးတို့အဘို့နှာခေါင်း Protargolum အတွက်ပေါက် - ညွှန်ကြားချက်များ
ဘယ်လိုအိမ်မှာ cellulite ဖယ်ရှားပစ်ရရန်နှင့်အစဉ်အမြဲအကြောင်းကိုမေ့လျော့?
ငါးနှင့်ဆန်နှင့်အတူ Pie - အရသာချက်ပြုတ်နည်းများအောင်မြင်သောမုန့်စိမ်းနှင့်အရသာ toppings
အမဲသား tripe - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
အဆိုပါပထမ, ဒုတိယသို့မဟုတ်တတိယကလေးက - ခြားနားချက်ခံစားရ
ယောရှုသည်saß Minogue အတူတက်ခြိုးဖောကျပွီးနောကျတိတ်ဆိတ်ဖဲ့လျှို့ဝှက်၏စွပ်စွဲချက်မှတုန့်ပြန်
Meatballs - စာရွက်